Google has removed popular android apps committing major privacy violations. ﻿
Google has removed popular android apps committing major privacy violations.
Privacy ကို အလွန်အကျူးချိုးဖောက်လျှက်ရှိနေတဲ့ လူသုံးများနေသော Android App များကို Google မှ ဖယ်ရှားခဲ့
Dr. Web မှ လေ့လာသူများရဲ့ တွေ့ရှိချက်အရ Facebook Login အချက်အလက်များကို ခိုးယူလျှက်ရှိနေတဲ့ App (၉) ခုကို Google မှ ဖယ်ရှားခဲ့ကြောင်းကို Ars ရဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ သိရှိရပါတယ်။ အဆိုပါ malware ကို ကမ္ဘာတစ်လွှားတွင် download ပြုလုပ်သူ စုစုပေါင်း ၅.၈ သန်းခန့်ရှိခဲ့ပြီး “Horoscope Daily” နှင့် “Rubbish Cleaner” ကဲ့သို့သော အလွယ်တကူရှာဖွေအသုံးပြုနိုင်သည့် Application များအဖြစ် ဟန်ဆောင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Google ကတော့ အဆိုပါ app များနှင့်ပတ်သက်၍ တာဝန်ရှိတဲ့ developer များကို သူတို့ရဲ့ Play Store ပေါ်မှ Ban လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း Ars သို့ ပြောကြားခဲ့သော်လည်း ထိုသူများအနေနဲ့ နောက်ထပ် developer အကောင့် အသစ်များကို ဖွင့်လှစ်၍ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့အတွက် Google အနေနဲ့ Cyber Attack တိုက်ခိုက်မှုများကို ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် Malware များကို ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးနိုင်ဖို့ လိုအပ်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။